Usuku My Pet » Yini Ingabe Abesifazane Want in a Relationship?
Igcine ukubuyekezwa: Oct. 29 2020 | 2 imiz ufunde
Ngokombiko Ucwaningo iqhutshwa 2012, 41% abashada okokuqala, 60% Imishado yesibili futhi 73% usushada okwesithathu in the end United States ngesehlukaniso. Lezi zinombolo ezethusayo ngempela futhi ubonise ukuthi abesilisa nabesifazane US bayehluleka ukuba ubudlelwano obuqinile ngempela. Ukuze ubuhlobo ukuba uqine, bobabili ophathina kumele baqonde ngezidingo ngokuphelele. Ngakho, lapha kukhona izinto ezithile abesifazane ngoba ubuhlobo.
Uthando: Ungase ucabange omunye akudingeki ukuba owesifazane ufune uthando, kodwa sasingeke siqhubekele phambili ngaphandle kokukhuluma “thanda” njengoba abesifazane nje abathanda sizizwe sithandwa. It akusho ukuthi owesifazane ufuna indoda ekuphileni kwakhe ukuze enze obala uthando njalo ngezikhathi ezithile, kodwa efuna nje kuye esimelela uthando lwakhe kungabonakali ngezenzo nangamazwi njengoba njalo ngangokunokwenzeka; ngezikhathi obala uthando akukubi noma. Ngakho, uma umuntu, ukulondoloza obuqinile wesifazane omthandayo kumele siqhubeke ekhumbuza wakhe kungakanani uyamthanda ngamazwi nangezenzo.
Security: Uhambo ukuphila akulula ubani, kungakhathalekile ubulili, kodwa kwabesifazane uhambo ngokuvamile ngisho enqola. Bavame ukuba abhekane ezahlukene nezindaba zokuphepha cishe konke ukuphila kwabo, a share enkulu kuwona ihlobene ubulili babo.
Ukuze besifazane US, ukuhlukunyezwa ngokocansi akuyona into angajwayelekile. A ucingo wayemele kuzwelonke survey ezihilela 612 Abesifazane omdala iqhutshwa June, 2000 lwembula ukuthi cishe bonke abaye babhekana ukuhlukunyezwa street esikhathini esithile ekuphileni. Around 87% abesifazane abaneminyaka ephakathi kuka-American 18 futhi 64 batholwe eminyakeni okuhlangenwe nakho ngahlushwa umuntu ongamazi besilisa.
Le awokuthi of ukubanjwa behlukunyezwa kushiya abesifazane kakhulu bengalondekile. Ngakho, bafuna umlingani abangamethemba ngokuphelele. Abesifazane balangazelela Abalingani izobamba indima umvikeli ephelele futhi zizizwe zilondekile.
Njengoba umuntu uma uphumelela ekwenzeni oshade naye wazizwa elondekile, ngokushesha uzobona wokuvula wakhe kuwe kokubili ngokocansi nangokomzwelo. Lokhu kuzokwenza ngokuzenzekelayo ukwenza isibopho phakathi kwakho ngisho kunamandla.
Joke: Amahlaya kubaluleke kakhulu kwabesifazane. Abesifazane njalo bheka amadoda nge kancane enamancoko ie. Amadoda abangakwazi abenze ukuhleka. Ngokombiko survey eyenziwa MarketTools Inc, 58% abesifazane bafuna abalingani babo ukuba babe amancoko. Ngakho, umuntu ngifuna izindlela ukwenza abashade yakhe ngijabule futhi nganelisekile kufanele azame ukuba at best yakhe wittiest.
Inhlonipho: Nakuba thina kokukhuluma it last, Ukuhlonipha in Kungenzeka into ebaluleke kakhulu ukuba ebudlelwaneni for the iningi labesifazane American. Ucwaningo by MarketTools Inc lwembula ukuthi 84% abesifazane banomuzwa wokuthi ubuhlobo ukuba siphumelele, ukuthola inhlonipho umlingani kubaluleke kakhulu.
Kumele ezibuza “kuthiwani ekubukekeni”? Yebo, abesifazane athande ukuba amadoda kanye nabalingani abakhuluphele ezikhangayo, kodwa ngabo alilokothi yezimfanelo kuqala ukubheka ngoba umuntu.
3 Amathiphu Great To The Best Ukwakha Online Dating Profile
Top 4 Amathiphu Okufanele Uzazi Dating